Taliye Indha- Qarshe ” ciidamada gadoodka sameeynaayo waa ay lumi doonaan” + COD | Wardoon
Home Somali News Taliye Indha- Qarshe ” ciidamada gadoodka sameeynaayo waa ay lumi doonaan” +...
Taliye Indha- Qarshe ” ciidamada gadoodka sameeynaayo waa ay lumi doonaan” + COD
Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe oo la hadlay Saraakiil ka tirsan Ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa bogaadiyay shaqada wangaasan ee dalka u hayaan.
Waxa uu sheegay Taliye Indha-Qarshe in dowladda ay ku howlan tahay diiwaangelinta Ciidamada dowladda,isla markaana uu socdo tirakoobka lagu sameeynayo.
Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu Digniin u diray Ciidamada gadoodka sameeynayo,isagoo xusay in ay lumi doonaan,halka kuwa doonaya hormarka dalka ay kusii jiri doonaan Ciidamada Xoogga dalka.
Previous articleSoomaaliya iyo Turkiga oo kala saxiixday heshiis dhul isdhaafsi
Next articleDaawo:Sidee Qaraxyada Loogu Weeraray Xarunta Wasaarada Shaqada & Shaqaalaha Soomaaliya?
Maamul goboleedyada oo kasoo horjeestay Wasiir Beyle
DAAWO:-Beel sheegtay in 50 qof laga xiray